Ny famaritana ny Alcatel OneTouch Idol 4 sy ny idol 4 dia voasivana | Androidsis
Roa latsaky ny telo herinandro hiarahana aminay ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday, dia toa izany nilamina kely ny rano Alohan'ireo famoahana ireo izay matetika dia avy amin'ny loharano malaza indrindra toa ny @evleaks. Ireo rano milamina ireo amin'izao fotoana izao dia ny fampidirana an-tsehatra fa tsy latsaka ny akoho akoho dia manomboka mandefa ny sary ofisialin'ny Mi 5, ny LG G5 na ilay horonan-tsary teaser an'ny Galaxy S7 vaovao izay mahatonga antsika ho lava nify rehefa fantatsika fa bateria tena tsara na ilay toetra mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana mafy orina aminy, izay raha ny tokony ho izy, dia vitsy. Ny tena hafahafa mazàna dia ny mpanamboatra azy ihany no manivana ny famaritana ireo findainy vaovao toa izay niseho tamin'ity vaovao ity androany avy amin'ny Alcatel.
Ny famaritana ny telefaona roa an'ny Alcatel manaraka, ny OneTouch Idol 4 sy ny One Touch Idol 4S, dia navoakan'ny mpamokatra ihany. Alcaltel dia efa nahavita tamin'ny taon-dasa mba handanjalanja tsara amin'ny resaka fitaovana sy ny vidin'ny Alcatel OneTouch Idol 3 sy OneTouch Idol 3, ka ho an'ny taranaka vaovao dia toa hanaraka izay nitranga teo aloha tamin'ny fanontana taloha ny zava-drehetra. Telefaona roa izay Azo antoka fa tsy hihoatra ny vidiny izy ireo namidy ireo roa teo aloha izay nisy $ 180 ho an'ny Idol 3 ary $ 250 ho an'ny Idol 3S. Satria manana ny mombamomba anao rehetra izahay, handeha handroso hahalala ny anatiny sy ny mivoaka ary ny antsipirian'ny terminal roa izay ho hitanay any Barcelona afaka telo herinandro latsaka.
Ny kely indrindra amin'ireo finday Alcatel roa dia ny OneTouch Idol 4. Fantsona iray izay tsy mitovy amin'ny teo alohany tamin'ny haben'ny efijery, miala amin'ny 4,7 santimetatra amin'ilay teo aloha miaraka amina fanapahan-kevitra 720 x 1280 teboka, hatramin'ny 5,2 santimetatra ary vahaolana 1080 x 1920 ao amin'ny OneTouch Idol 4 vaovao.
Ao amin'ny vavoniny dia ho hitanao ny puce iray manana hery lehibe Snapdragon 617 noho manolo ny fidirana teo aloha Snapdragon 410, ary anisan'ireo antsipiriany misy azy io dia manana core ARM Cortex-A53 efatra amin'ny hafainganana famantaranandro 1.7 GHz ary efatra fanampiny A53 amin'ny 1.2 GHz. Ity mpikirakira ity dia hiaraka RAM 2 na 3 GB, arakaraka ny kinova novidiana, Ary amin'ny lojika dia hanolotra hery fanodinana lehibe kokoa izy io mba ho avo lenta ny traikefa Android ary azon'ilay mpampiasa alefa ny karazana fampiharana na lalao video rehetra nefa tsy manahy ny zava-bitany.
Ny OneTouch Idol 4 dia ahitana ao amin'ny sary ampahany fakan-tsary 13 MP aoriana, a 8 MP eo aloha, Fitehirizana anatiny 16 GB ary bateria 2.160 XNUMX mAh.
Ny zokin'izy roa dia ny Idol 4S ary inona no ankamaroan'ny fanavaozana avy amin'ny Idol 3 5,5 santimetatra. Eo amin'ny efijery dia hampiavaka azy ny tabilao AMOLED 5,5 santimetatra miaraka amina vahaolana 1440 x 2560 teboka, izay zavatra miavaka indrindra amin'ny fisian'ilay efijery misy 1080p vahaolana tao amin'ny Idol 3 teo aloha.
Ao anatin'ny telefaona ny Idol 4S dia manasongadina a chip mahery Snapdragon 652 matanjaka kokoa noho ny Snadpragon 615 octa-core ARM Cortex A53 tafiditra ao amin'ny Idol teo aloha. Ity SoC ity dia mampiasa core ARM Cortex A72 efatra amin'ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 1.8 GHz ary core efatra Cortex-A53 amin'ny 1.4 GHz. Ao amin'ny RAM dia ahitantsika 3 GB RAM sy fahatsiarovana anatiny 16 GB. Ao amin'ny fikirakirana fakan-tsary dia mandeha amin'ny alàlan'ny sensor fakantsary 16 MP sy ny 8 MP aoriana ny zavatra.
Raha fintinina, ny Alcatel Idol 4 sy Idol 4S dia fanavaozana lehibe roa ho an'ireo teo alohany, fa raha manaraka ny fepetra voalaza ao amin'ny vidiny izy ireo mba tsy hihoatra ny 250 dolara dia azo antoka fa safidy mividy izy ireo. Raha mampiakatra ny vidiny izy ireo dia hanana olana amin'ny fivarotana azy ireo, satria amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fotoana sarotra kokoa ny tsenan'ny Android amin'ny alàlan'ny mpamokatra maro mandefa karazana filokana sy terminal izay sarotra be indraindray ny miatrika azy io. Xiaomi's Redmi 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny famaritana Alcatel OneTouch Idol 4 sy 4S dia mivoaka
Vaovao be izany! Tiako ny ALCATEL hatrizay ary tena tsara ny specs amin'ireto roa ireto!
Efa nanaitra ahy tamin'ny IDOL 3 izy ireo ary toa nihatsara teo amin'ny sainam-pirenena ireo smartphone roa ireo.
Vaovao miandry ny famolavolana sy ny vidiny, saingy azo antoka fa gaga izy ireo fa hahita soa.
Fividianana raikitra amin'ity taona vaovao ity! 🙂
Update dia hoy izy:
Novidiko tamin'ny fomba estetika ny sampy 2, manana endrika tena tsara izy ary tena tsara fa tsara izany, saingy hamotsotra ny sampy 4 izy ireo ary tsy nanavao ilay sampy akory izy ireo 2. Izany dia ao amin'ny 4.2.2 jelly bean anao efa fantatrao izay antenaina. Ny finday nohavaozina alcatel dia tsy dia tsara loatra n .. izany no zavatra niainako sy hevitro.
Valiny amin'ny fanavaozana